नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हिन्दु सम्मेलनको उद्घाटनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले के के भने ?? हेर्नुस पूर्ण विवरण
हिन्दु सम्मेलनको उद्घाटनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले के के भने ?? हेर्नुस पूर्ण विवरण
हिन्दु धर्म एवम् दर्शन विश्वकै महान र उदार छ । अध्यात्म जीवन पद्धति विश्वकै निम्ति अनुकरणीय छ । सनातन मान्यता, मौलिक विशेषता र आफ्नै प्रकारको उदार आस्था तथा आदर्श हाम्रो धर्मको सार संक्षेप हो भन्ने मलाई लाग्दछ । विश्वको यो प्राचिन ऐतिहासिक पाशुपत क्षेत्रमा विश्वकै अग्रगन्य आचार्य, गुरु, सन्त, महात्मा, पिठाधिश एवम् विद्वान विवेचकहरुको भेला हुनु आफैँमा स्तुत्य कार्य हो । म यहाँ पाल्नु भएका जगतगुरु शंकराचार्य,
मठाधीश, पिठाधिश, गुम्वाचार्य र विभिन्न आश्रम प्रमुख धर्माधिमहरुप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु ।